Iqembu elibusayo liwaphosa nxazonke yini amehlo? - Bayede News
Iqembu elibusayo liwaphosa nxazonke yini amehlo?
Akuvumanga iqophe umlando intokazi kaWilliams kwezomphebezo
Ukungahlonishwa kwamanye amaqhawe avela kwamanye amaqembu alwela inkululeko yakuleli kuyoba nomonakalo oyobulala izingane zethu nezizukulwane ezizayo, kubhala uMfo waKwaNomajalimane
Uma kuqala lo nyaka, iqembu elibusayo ngomlomo kaMengameli walo uRamaphosa lenze ngakhona ngokusazisa ukuthi injolozela izobe ikuMama onomlando omuhle nomude uCharlotte Makgomo Maxeke.
Lesi kube yisinqumo esiphusile ngoba nembala umelwe wukuhlonishwa yithi nokuyinto okumele ngabe sayenza njengesizwe. Ngeke lasala igama lalesi sigomagoma kwabesifazane ababamba iqhaza elikhulu emzabalazweni wenkululeko eNingizimu Afrika nokubeka phambili amalungelo abesifazane. Lona wayeyisishoshovu nesikhuphekhuphe somzabalazo, umholi wezenkolo nomphakathi kanti waba ngowesifazane wokuqala woHlanga eNingizimu Afrika ukuthola iziqu zemfundo ephakeme iB.Sc. azithola eNyuvesi iWilberforce e-Ohio, e-USA, ngowe-1901. Waba ngowokuqala wesifazane woHlanga ukuthola iziqu zemfundo ephakeme e-USA.
Ube sekhaleni lempi elwa nokuxhashazwa kwaboHlanga kanye nokulwela izimo zenhlalo ezinhle zabesifazane boHlanga. Le ngqalabutho izalwe ziyisi-7 kuMbasa we-1874 eRamokgopa esifundazweni iLimpopo yadlula emhlabeni zili-16 kuMfumfu we-1939. Kunesibhedlela esiseGoli iCharlotte Maxeke Academic Hospital esiqanjwe ngaye.
Nokho kubo bonke lobu buhle kukhona umkhuba omubi owenziwa yiqembu elibusayo. Lo mkhuba uyalilulaza kulo mlando walo omkhulu kangaka njengelinye lamaqembu amadala kwezombangazwe. Yebo siyakuzwa ukuhlonishwa kwamaqhawe ethu kepha kubukeka sekwamukelekile ukuthi amaqhawe lawa avela kule nhlangano kuphela.
Nalawo nje angewona ale nhlangano kuthi uma kwenzekile kwakhulunywa ngawo bese umlando wawo ngabomu ulunjaniswe noKhongolose ngisho kungenjalo. Ngisho izinsuku ezimqoka kwenzeka njalo, isibonelo usuku lwangomhla zingama-21 kuNdasa noluthinta umlando kaSobukwe namalungu kaPoqo. Kanjalo nosuku lwamhla zili-16 kuNhlangulana oluthinta abeBlack Consiciousness nabePan Africanist Congress ( PAC).
Kule minyaka engaphezu kwama-25 leli lashiya inqubo yobandlululo kuba nezifundo ngomlando namaqhawe omzabalazo. Angazi noma-ke yimi engingaqapheli kepha kulezi zifundo angikezwa nje ngaMakhosi afana noMamongwa woSuthu, uDinuzulu kaCetshwayo namanye aMakhosi namafelankosi ayibamba ishisa.
Angikezwa kutuswa abantu ababesezinyunyaneni, angikezwa ngeqhaza lePAC, le-Azanian People’s Organisation (AZAPO), le-United Democratic Front (UDF) kanye neleNkatha Yenkululeko Yesizwe. Asikezwa ngegalelo labantu abafana noKE Masinga, oSobaba uZulu owaba nguMbhishobhi wokuqala omnyama – nali ibandla lakhe lapha eSt Faith’s Anglican Church enkabeni yeTheku.
Asizwa ngobaba uMsizi Dube we“Asinamali” lapha eLamontville, baphi obaba u-Archie Gumede be-UDF? Baphi abangakini nawe obaziyo abalwa, baboshwa badingiswa abanye bafa? Usuzwile nje ngabo? Ngiyazi abanye bazothi qha angingaxhamazeli ngoba isikhathi sisekhona, kepha iqiniso elimsulwa lithi kasisekho kulo nyaka.
Umbono wami uthi uKhongolose kusuka kuleli sonto uyobe unake izindaba zawo namalungu awo hhayi lokhu okuwumlando wethu sonke okuyinto eyingozi. Uma kukhona okusazokwenzeka kule minyaka kuyobe nje sekuthelwe amanzi umongo ungekho, okuyobe kuqhakambiswa nje ngabathile abathandwa ngosomlando abasebenza kuHulumeni nabo bencenge iphalishi.
Kepha lokhu kusho ukuthini kithi njengezakhamuzi nabanikazi bomlando? Ngaphandle kokuthi sizolahlekelwa wumsoco womlando ebesingawuthola ukuba uKhongolose wenze kahle, iqiniso lithi isithombe esikhona nesizoba khona yileso esiveza okungaphelele ngathi kanye nomlando wethu. Kuzoqhubeka ukucabanga ukuthi umzabalazo wethu uqale ngowe-1912 nokuthi wuhlangothi noma yisizukulwane esithize kuphela esazabalaza.
Lo monakalo uyobulala izingane zethu kanye nezizukulwane futhi okubuhlungu wukuthi leli phutha lenziwa yinhlangano elwaziyo usizi lokuhlanekezelwa komlando.
Umbuzo-ke uthi sikhona yini isixazululo, kukhona yini esingakwenza? Owami umbono uthi yebo sikhona isixazululo nokuthi kukhona esingakwenza. Ngiyakholwa futhi ukuthi konke kulele kubantu hhayi ku-ANC noma kuHulumeni kepha kimi nawe. Njengabantu abangabanikazi bomlando, ezikoleni, ematekisini emabandleni asiqale ukuziqoqela umlando wezindawo zethu.
Lokhu singakwenzi ngoba sigubha okuthize kepha sikwenze ngenhloso yokufundisana nokufunisana umlando wethu sonke. Cabanga nje uma kungase isikole nesikole sithume ingane ukuba iyoqoqa umlando wakubo kogogo nomkhulu noma kubazali bayo okanye abafowabo nodadewabo? Uma lokho kungenzeka ngesonto nje ungabe usunezincwadi ezingaki zomlando obungawazi njengesikole nesizwe? Lokho singakwenza futhi kwenzeke.
Ukuqinisekisa ukuthi izingane ziyakwenza izikole kumele lokhu zikwenze njengento enganika umfundi amaphuzu emsebenzini wakhe wesikole, ngaleyo ndlela umsebenzi lo uyoba yingxenye yezivivinyo, okusho ukuthi empeleni ayikho imali okumele isikole noma abantu bayikhiphe.
Konke lokhu siyobe sikwenzela ukuthi abalandelayo bazuze ngoba ngisamile kwelokuthi uKhongolose ubhekene nezawo izibi ngakho ngeke usilekelele kakhulu kulokhu okumqoka kangaka kithi sonke, umlando.
nguMfo waKwaNomajalimane Feb 19, 2021